We She Me: ရွှေညောင်ပင် ကြက်သားသုပ်
Phyo Wai Kyaw - 5/21/07, 4:24 PM
Mouth watering when I read this blog! Good idea! ;-)
Nay Nay Naing - 5/22/07, 7:01 PM
ကျေးဇူးပဲ.. ကြက်သားကို ချက်တာမကြိုက်လို့ကြော်တာကြီးပဲ စားဖြစ်နေတာ. နောက်မှ ဒီထဲကနည်းအတိုင်း ကြက်သားသုပ် လုပ်စားအုံးမယ်..
Okkar Zaw win - 5/23/07, 1:04 AM
BE လေးနဲ့ဆို ပိုမကောင်းပေဘူးလား။ ဟဲ..ဟဲ..ဟဲ…
Anonymous - 2/25/10, 9:15 PM
Crystal - 2/11/11, 2:58 AM
ရှာဖွေပြီး ရောက်လာခဲ့ပါတယ်ရှင်။ ပိုစ့်လေးအတွက်ကျေးဇူးပါ။